यूहन्ना १८ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उज्बेक उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मराठी मले मल्यालम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन
१८ यी कुराहरू भनिसकेपछि, येशू आफ्ना चेलाहरूसित किद्रोन खोल्सा तरेर बगैंचा भएको ठाउँमा जानुभयो। त्यसपछि आफ्ना चेलाहरूसित उहाँ त्यस बगैंचाभित्र पस्नुभयो। २ उहाँलाई धोका दिने यहूदालाई पनि यो ठाउँ थाह थियो, किनकि यस ठाउँमा येशूले धेरै चोटि आफ्ना चेलाहरूसित भेटघाट गर्नुभएको थियो। ३ त्यसैले सिपाहीहरूको एउटा दल अनि मुख्य पुजारीहरू तथा फरिसीहरूले पठाएका मन्दिरका पहरेदारहरूलाई लिएर यहूदा त्यहाँ पुगे। तिनीहरूले राँको, बत्ती अनि हातहतियार बोकेका थिए। ४ तर आफूमाथि आइपर्न लागेका सबै कुरा येशूलाई थाह थियो। त्यसैले अघि बढेर उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ?” ५ तिनीहरूले जवाफ दिए: “नासरी येशूलाई।” अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “त्यो मै हुँ।” उहाँलाई धोका दिने यहूदा पनि त्यतिखेर तिनीहरूसितै उभिरहेका थिए। ६ तर उहाँले “त्यो मै हुँ” भन्नेबित्तिकै तिनीहरू पछि हटे अनि भुइँमा लोटे। ७ त्यसैले, उहाँले तिनीहरूलाई फेरि सोध्नुभयो: “तिमीहरू कसलाई खोज्दैछौ?” अनि तिनीहरूले जवाफ दिए: “नासरी येशूलाई।” ८ येशूले भन्नुभयो: “त्यो मै हुँ भनेर मैले भनिहालें नि। यदि तिमीहरूले मलाई नै खोजिरहेका हौ भने यिनीहरूलाई जान देओ।” ९ “तपाईंले मलाई दिनुभएका मानिसहरूमध्ये एक जना पनि मैले गुमाएको छैन” भन्ने आफ्नो वचन पूरा होस् भनेर उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो। १० तब सिमोन पत्रुसले आफूले बोकेको तरबार थुते र प्रधान पुजारीको दासलाई प्रहार गरेर तिनको दाहिने कान च्वाट्टै काटिदिए। त्यस दासको नाम माल्कस थियो। ११ तर येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो: “तरबार म्यानभित्र हाल। बुबाले मलाई दिनुभएको कचौराबाट* के मैले हरहालतमा पिउनुपर्दैन र?” १२ तब सिपाहीहरूको दल, तिनीहरूको सेनापति* अनि यहूदीहरूका पहरेदारहरूले येशूलाई समातेर बाँधे, १३ अनि तिनीहरूले उहाँलाई सबैभन्दा पहिला हन्नासकहाँ लगे, किनकि तिनी त्यस वर्षका प्रधान पुजारी कैयाफाका ससुरा थिए। १४ वास्तवमा कैयाफा त्यही मानिस थिए, जसले सबै मानिसहरूको निम्ति एक जना मानिस मर्नु फाइदाजनक हो भनेर यहूदीहरूलाई सल्लाह दिएका थिए। १५ तब सिमोन पत्रुस अनि अर्को एक जना चेला येशूको पछि-पछि गइरहेका थिए। त्यस चेलाको प्रधान पुजारीसित चिनापर्ची थियो। त्यसैले येशूलाई पछ्याउँदै ऊ प्रधान पुजारीको चोकभित्र पस्यो, १६ तर पत्रुस भने ढोकाबाहिर उभिरहेका थिए। त्यसैले प्रधान पुजारीसित चिनापर्ची हुने त्यो अर्को चेला बाहिर निस्क्यो अनि ढोकेसित कुरा गरेर पत्रुसलाई पनि चोकभित्र ल्यायो। १७ तब त्यस ढोके अर्थात्‌ नोकर्नीले पत्रुसलाई सोधी: “तिमी पनि त्यस मानिसका चेलाहरूमध्ये एक जना होइनौ र?” तिनले जवाफ दिए: “अहँ, होइन।” १८ त्यतिखेर, वरपर उभिरहेका दासहरू अनि पहरेदारहरू जाडो भएकोले आगो बालेर तापिरहेका थिए। पत्रुस पनि तिनीहरूसित उभिएर आगो तापिरहेका थिए। १९ तब मुख्य पुजारीले येशूलाई उहाँका चेलाहरू अनि उहाँका शिक्षाहरूबारे केरकार गरे। २० येशूले तिनलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “मैले मानिसहरूसामु खुलमखुला बोलें। मैले सधैं सभाघर अनि मन्दिरमा सिकाएँ, जहाँ सबै यहूदीहरू भेला हुन्छन्‌। मैले कुनै कुरा गुप्तमा बोलिनँ। २१ तैपनि तपाईं मलाई किन केरकार गर्नुहुन्छ? गएर तिनीहरूलाई नै सोध्नुहोस्, जसले मेरा कुराहरू सुनेका छन्‌। हेर्नुहोस्, मैले के-के भनें, तिनीहरूलाई थाह छ।” २२ उहाँले यी कुराहरू भन्नुभएपछि त्यहाँ उभिरहेका एक जना पहरेदारले येशूलाई मुखमा एक थप्पड हिर्काएर यसो भन्यो: “मुख्य पुजारीलाई जवाफ दिने तरिका यही हो?” २३ येशूले उसलाई भन्नुभयो: “यदि मैले गलत कुरा गरेको हो भने मेरो गल्ती देखाइदेऊ; यदि ठीक कुरा गरेको हुँ भने तिमी मलाई किन त्यसै थप्पड हिर्काउँछौ?” २४ तब हन्नासले बाँधिएकै हालतमा उहाँलाई प्रधान पुजारी कैयाफाकहाँ पठाए। २५ सिमोन पत्रुस उभिएर आगो तापिरहेका थिए। तब उनीहरूले तिनलाई सोधे: “तिमी पनि त्यस मानिसका चेलाहरूमध्ये एक जना होइनौ र?” तिनले यसो भन्दै नकारे: “अहँ, होइन।” २६ तब मुख्य पुजारीका दासहरूमध्ये एक जना, जो पत्रुसले कान काटेका मानिसको नातेदार थियो, उसले यसो भन्यो: “मैले तपाईंलाई उहाँसित बगैंचामा देखेको होइन र?” २७ तर पत्रुसले फेरि नकारे अनि उत्तिखेरै भाले बास्यो। २८ त्यसपछि तिनीहरूले येशूलाई कैयाफाकहाँबाट राज्यपालको महलमा लगे। त्यतिखेर बिहान भइसकेको थियो। तर आफू अशुद्ध हुन नपरोस् अनि निस्तार चाडको रोटी खान पाइयोस् भनेर तिनीहरू आफू भने राज्यपालको महलभित्र पसेनन्‌। २९ त्यसैले पिलातस आफै बाहिर निस्केर तिनीहरूकहाँ आए र सोधे: “तिमीहरू यस मानिसलाई के आरोप लगाउँछौ?” ३० तिनीहरूले पिलातसलाई यस्तो जवाफ दिए: “यदि यस मानिसले केही गल्ती नगरेको भए हामी यसलाई तपाईंको जिम्मा लगाउने नै थिएनौं।” ३१ यो सुनेर पिलातसले तिनीहरूलाई भने: “तिमीहरू आफै यसलाई लगेर आफ्नो व्यवस्थाबमोजिम न्याय गर।” तर यहूदीहरूले तिनलाई यस्तो जवाफ दिए: “हामीसित कसैलाई मार्ने अधिकार छैन।” ३२ आफूले कस्तो प्रकारको मृत्यु भोग्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा येशू आफैले भन्नुभएको कुरा पूरा होस् भनेर वास्तवमा यसो भएको थियो। ३३ तब पिलातस फेरि महलभित्र गए अनि येशूलाई बोलाएर सोधे: “के तिमी यहूदीहरूका राजा हौ?” ३४ येशूले जवाफ दिनुभयो: “तपाईं आफैलाई त्यस्तो लागेर सोध्नुभएको हो वा अरूले मेरो विषयमा भनेको कुरा सुन्नुभएर?” ३५ पिलातसले जवाफ दिए: “के म यहूदी हुँ र? तिम्रो आफ्नै जाति अनि मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई मेरो जिम्मा लगाएका हुन्‌। भन, तिमीले त्यस्तो के गऱ्यौ?” ३६ येशूले जवाफ दिनुभयो: “मेरो राज्य यस संसारको होइन। यदि मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त, म यहूदीहरूको हातमा नपरोस् भनेर मेरा सेवकहरूले लडाइँ गर्नेथिए। तर कुरा के हो भने, मेरो राज्य यस संसारको होइन।” ३७ यो कुरा सुनेर पिलातसले उहाँलाई सोधे: “उसोभए, के तिमी राजा नै हौ त?” येशूले जवाफ दिनुभयो: “म राजा हुँ भनेर तपाईं आफै भन्दै हुनुहुन्छ। सत्यको साक्षी दिन म जन्मिएको हुँ र यसैको लागि म यस संसारमा आएको हुँ। सत्यको पक्षमा हुने जति सबैले मेरो सोर सुन्छन्‌।” ३८ पिलातसले उहाँलाई सोधे: “के हो सत्य?” यति भनिसकेपछि फेरि बाहिर गएर तिनले यहूदीहरूलाई भने: “मैले यस मानिसमा कुनै दोष भेटिनँ। ३९ यसबाहेक, निस्तार-चाडको बेला मैले एक जना मानिसलाई मुक्त गर्नुपर्ने तिमीहरूको चलन छ। त्यसोभए, के तिमीहरू यहूदीहरूको यस राजालाई मैले मुक्त गरेको चाहन्छौ?” ४० तर तिनीहरू यसो भन्दै फेरि चिच्याए: “यस मानिसलाई होइन, बरु बरब्बालाई मुक्त गर्नुहोस्!” वास्तवमा, बरब्बा डाँकु थियो।
^ मत्ती २६:३९ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ वा, “हजार जना सिपाहीको नाइके।”